Waa maxay dabka San Telmo? | Saadaasha Shabakadda
Sawirka: Blog Aero Hispano
Waagii hore, haddii aad si joogto ah u dhoofto, waxay ahayd wax aad u fudud in aad ku dambayso la kulanka waxa ku dhammaaday in loogu yeedho Dabka San Telmo, dabkaas oo umuuqday mid aan weligiis guban oo kuu oggolaaday inaad sii wadato koorsadaada adigoon dhibaatooyin waaweyn qabin.
Laakiin, Runtii maxay tahay sideese u samaysan tahay?
Dabka San Telmo waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay dhalaalka iftiinka u eg ee dhimbiillo ka boodaya biraha inta lagu jiro duufaan daran. Dhimbiilyadan, oo aan ka duwanayn hillaaca hillaaca, ma laha jiho khaas ah, waana la arki karaa dhowr daqiiqo ka dib markay soo baxaan. Marka maahan nooc ka mid ah hillaaca oo dab maahan (runtiina, waa plasma). Waxaa loo bixiyay magacaas maxaa yeelay San Telmo waa kan badmaaxiinta qaabka, kan iyaga ilaaliya.
Asalkiisa waxaa laga heli karaa korantada ma guurtada ah ee jawiga ku jirta, waxayna ku dhacdaa talooyinka walxaha dhaadheer, taas oo ah, masaska, baalasha diyaaradaha, tiirarka nalka, iyo kuwa kale. Dhacdadani waxay dhacdaa markii duufaan xoog leh ay abuurto aag koronto oo kale ah oo awood u leh inay hawada ionizing. Kalsoonidu waa dhacdo taas Waxaa loo soo saaray atam koronto ama mashiinno koronto ku xiran sababtoo ah la'aanta ama xad-dhaafka elektaroonigga marka loo eego maaddooyinka dhexdhexaadka ah. Marka faraqa u dhexeeya kan iyo kan kale uu sare u kacsanaado, dhimbiillooyinka Dabka ee San Telmo ayaa soo muuqda.
In kasta oo aanu keenin dhaawacyo, kiis ayaa la ogyahay oo ay jireen dilal. Bishii Meey 6, 1937, 36 qof ayaa lagu diley zeppelin-ka Hindenburg. Tani waxay ahayd sababtoo ah hydrogen-ka markii hore loo isticmaali jiray si loo buuxiyo wuxuu lahaa khatar sare oo dabka.
Laakiin hadda, haddii ay tahay inaad diyaarad ama doon soo qabato oo uu ku qabsado Dabka San Telmo ... tranquilo, oo ku raaxee, wax khatar ah ma jiraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dabka San Telmo: waa maxay?